Thierry Henry oo loo magacaabay tababaraha Monaco – Bandhiga
Thierry Henry oo loo magacaabay tababaraha Monaco
Halyeeygii hore Arsenal Thierry Henry ayaa loo magacaabay tababaraha cusub ee kooxda As Monaco kaas oo kursiga keydka kooxdaas ku fariisan doona ilaa June 2021 sida heshiiska lagu gaaray.
41-jirka reer France ayaa waayahiisa tababaranimo ka bilaabay inuu caawiye u noqdo xulka Belgium isagoo ka hoos shaqeeyay Roberto Martinez, sidoo kalana wuxuu waayahiisa xiddignimo ka caawiyay kooxda Monaco iney hanato horyaalka sanadkii 1997.
Kooxdaan sanadkii 2017 ku guuleysatay horyaalka Faransiiska ayaa fadhisa boosak 18-aad ee horyaalka kadib markii ay qaab xun ku bilowdeen, maamulka kooxda ayaana go’aan ku gaaray iney shaqada ka eryaan Leanardo Jardim.
“Waxey u muuqataa iney qadar tahay inaan waayaheyga tababaranimo ka bilaabayo halkaan” ayuu yiri Henry oo ah gooldhaliyaha ugu sarreeya Arsenal.
Thierry Henry wuxuu sidoo kale kasoo muuqday kooxaha Juventus, Arsenal, Barcelona & New York City. waxaa isbuucii lasoo dhaafay aad loola xiriirinayay shaqada kooxda Aston Villa balse wuxuu doortay inuu qabto xilka Monaco.
“Monaco waxey mar walba u dhawdahay qalbigeyga, si aan caadi aheyn ayaan ugu faraxsanaha in la i siiyo fursadaan, balse waa qasab iney shaqo adag bilaabato”
Kulankiisa ugu horreeya wuxuu leylin doonaa Monaco 20-ka October marka ay la ciyaarayaan kooxda Strasbourg kulan ka tirsan horyaalka, afar maalmood kadibna wuxuu la ciyaari doonaa Club Brugge kulan ka tirsan Champions League.